Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bokugeza BaseCenterset / WOWOW I-Chrome Yendlu yangasese Ngomsele Wokukhipha
IZIBambo EZIPHINDE ZIBELELE NGENKWAZI YOKUNGCOLA: 4 intshi ompompi bokugezela obunemidwebo emibili yokubamba, okwenza kube lula ukulungisa amanzi nezinga lokushisa! I-arc spout ephezulu ikunikeza imvume eyanele ngaphansi kwesikhafu.
UKUFAKA KAKHULU: Ukufakwa okulula: Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu siza nomhlangano wokuphakamisa induku yokukhipha kanye namagilavu ​​amabili. I-4-inch centeret ne-3 hole mount design zivumela ukufakwa okulula.
IZINGA ELIPHEZULU NGAMANANI: Umlenze wethusi uqinisekisa ukuqina nokuthembeka; Yenziwe nge-BASF grade grade material, ivikele wena nempilo yomndeni wakho. Isiphetho sompompi oyize owenziwe nge-ABS aerator ungakusiza ukonga amanzi. (Le aerator ingathathwa yehliswe ngqo ngezandla ukuze uyihlanze)
OKUPHOLISIWE CHROME FINISH: I-Vanity ompompi esiphethweni esinjengesibuko esinjengesibuko se-chrome, idizayini eyingqayizivele ephezulu yokwakha ukwakheka okungaphelelwa yisikhathi. Non-ukugqwala, non-ukugqwala, anti-ekuqaleni.
I-SKU: 2321400C Categories: Oompompi Bokugeza BaseCenterset, Amanzi okugeza Tags: khipha umhlangano, chrome ebunjiwe, ukumelana kwamabala
2.2 x 6 x amasentimitha angu-7.5
3 Izimbobo Zesimanjemanje Ezimnyama Igumbi Lokugezela Eligcwele ...